ShweMinThar: September 2017
ခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ Night out သွားရင် Bar တွေ Club တွေမှာ Shisha ကိုလွယ်လွယ် ကူကူနှင့် ဝယ်ယူသောက်သုံး လို့ရပါတယ် Cigarette လိုမဟုတ်ပဲ အနံ့လေးတွေကလဲ မွှေးမွှေးသင်းသင်းလေးတွေဆိုတော့ လူကြီးလူငယ် ကျား မ မရွေး စမ်းသပ်သောက်သုံးဖို့ ဝန်မလေးကြဘူးပေါ့ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သောက်သုံးနေတာတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ရဲ့လား ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလဲ ဆိုတာတွေလဲ သိထားဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်မြင်မိတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဝါစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါသည်ဆိုတာ ကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါ Shisha smoking ကြတော့ကျွန်တော်တို့ culture လဲမဟုတ်တော့ သေချာမသိနိုင်ကြဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်က ထင်ခဲ့တာက Shisha က ဆေးလိပ်လောက်တော့ မဆိုးဝါးဘူးပဲထင်ခဲ့တာဗျ၊ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ Shisha ကိုစတင်ပြီးတာမြစ်နေကြပါပြီ။
🚫 Shsiha အကြာင်းသင်သိထားသင့်တဲ့ 11 ချက်
1. Shisha smokingက စီးကရက် သောက်ခြင်းနှင့်မကွာခြားပါဘူး။။
2. Shisha က carbon monoxide ပါဝင်မှုနှုန်း cigarette ထက်ပိုများပါတယ်၊ Carbon monoxide တွေက သွေးနီဥနေရာတွေဝင်ယူပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အင်္ဂါရပ်တွေကို oxygen ရောက်ဖို့ခက်ခဲစေတဲ့အတွက် organ တွေပျက်စီးစေပါတယ်။
3. Shisha smoking မှာလဲ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကတ္တရာ (tar)၊ carbon monoxide(car exhaust) ၊ heavy metal များဖြစ်ကြတဲ့ cobalt, lead အစရှိတဲ့ အရာဝတ္ထု ပစ္စည်း ingredient တွေပါဝင်ပါတယ်။
4. Shisha smoking ကဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလိုပါပဲ သွေးထဲက Nicotine level နှင့် နှလုံးခုန် မှုကိုမြင့်စေတယ် high ဖြစ်စေတဲ့အတွက် စွဲလန်းနှစ်ချိုက်ဖို့လဲလွယ် ကူပါတယ်။
5. Shisha မှာနောက်တစ်ခုပါတာက တော့ Charcoal မီးသွေးပါ လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ မီသွေး၊ သစ်သားတုံးတွေကို ရှုရှိူက်မိခြင်းကလည်း Cancer ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
6. Shisha smoking က ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းထက်ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အငွေ့တွေပိုဝင်ပါတယ် Shisha တစ် session ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀ -၈၀ မိနစ် ကြာနိုင်ပါတယ် အဲလောက်ကြာချိန်ကို ဆေးလိပ် သောက်မယ်ဆိုရင် အလိပ် ၁၀၀ နှင့်အထက်သောက်တာနဲ့ ညီမျှနေပါတယ်။
7. Shisha ကိုတစ်ခြား အမည်တွေနဲ့လဲ နိုင်ငံအရပ်ရပ်မှာခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ် hookah, boory, goza, narghile, arghile and hubble bubble.
8. Shisha smoking ကရေထဲကဖြတ်လာတဲ့ ပိုက်ကို အနံ့ အရသာ အမျိုးမျိုး ပန်းသီး ပူရှိန်း coffee စသည့် အရသာတွေ ကို tobacco နှင့်ပေါင်းစပ် ထားပြီး ရူရှိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
9. Shisha water pipes တွေကိုအများဆုံးနှင့် အရင်ဆုံးလုပ်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေက China, India, Pakistan, Eastern Mediterranean Region and United States. ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာပါ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သောက် သုံးနေကြပါတယ်။
10. သောက်သုံးတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေလည်းအခန့်မသင့်ရင် မွေးလာတဲ့ ကလေးက ပေါင်မပြည့်တာနှင့် အခြားမွေးဖွားရခက်ခဲစေတဲ့ အခြေနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
11. သောက်သုံးတဲ့ pipe တွေကို share မိရင်လဲ တီဗီ၊ ရေယုံ၊ အသဲရောင်အသားဝါ စတဲ့ လူအချင်းချင်း ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေ ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်ပါတယ်။
သိသိရက်နဲ့ လုပ်တာထက် မသိလို့လုပ်မိတာမျိုးမဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။
Credit: Explore With Khant
Posted by Alex Aung at 9:29 AM No comments:
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ ခေါင်းခဲစေရတော့မယ် Verification Process (1993-MoU)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင်းက ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်လက်ခံဖို့ ဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အပေါ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ချုပ်ဆိုခဲ့ တဲ့ ဘင်္ဂလားနဲ့မြန်မာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (Memorandum Of Understanding-MoU 1993) အတိုင်းသာ ပြန်လည်လက်ခံမယ်၊ အဲ့ဒီ MoU အရ နှစ်နိုင်ငံအကြားမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို မူတည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှန်တကယ် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံသားစိစစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် (Verification Process) ကို အချိန်မရွေး စတင်နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း၊ အဲဒီအပေါ် မူတည်ပြီးတော့သာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာချင်တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံဖို့ ကျွန်မတို့ အဆင်သင့်ရှိကြောင်းနဲ့ အဲဒီအချိန်က သဘောတူညီထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက သံတမန်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
အခုဆိုရင် နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေ အရဆိုရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးလာနေကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် အရေအတွက်ဟာ လေးသိန်းကျော် ရှိပြီလို့ ဖော်ပြနေကြသလို ဒီလူတွေဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ထိုးစစ်တွေ၊ သူတို့လူမျိုးတွေအပေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုနေကြပြီး ဒီလူတွေကို မြန်မာအစိုးရက ပြန်လက်ခံပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုကို ကျန်တဲ့အနွယ်တူ နိုင်ငံတွေက ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပြီး ယခုရက်ပိုင်း ကျင်းပနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ (UNGA) မှာ ဆွေးနွေးချက်အဆိုတစ်ရပ် တင်သွင်းကြဖို့ စီစဉ်ထားကြတာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ကြိုတင်သိရှိထားတဲ့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ကြိုကြိုတင်တင် တုံ့ပြန်ထားခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်သလို ထွက်မပြေးဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင် ကျေးရွာပေါင်း တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ဟာ ခြေရာလက်ရာမပျက် ကျန်ရှိနေပြီး နယ်မြေရှင်းလင်းရေးကို စက်တင်ဘာ ၅ ရက် နေ့မှာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပေမယ့် ဘာလို့ဆက်တိုက်ဆိုသလို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထွက်ပြေးနေရတာလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံက သံတမန်တွေကပါ ရှာရမယ်လို့လည်း တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေနေတဲ့ နေရာတိုင်း ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာရော၊ မဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာလည်း ဘာကြောင့် မဖြစ်တာလဲ၊ ဘာကြောင့် ပြဿနာဖြစ်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ဆက်နေကြရတာလဲဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို သိရဖို့ ဒီလူတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက်မေးမြန်းကြဖို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ သံတမန်တွေကို ပြောကြားတဲ့အထဲမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ချပြပြီး အမှန်တရားအတွက် ထပ်တလဲလဲ စိန်ခေါ်သွားခဲ့တာကို တွေ့ရှိကြရမှာပါ။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်း (Verification Process) မှာ အချို့မွတ်ဆလင်တွေက ပါဝင်ဖို့ ငြင်းဆန်နေတဲ့အတွက် ဒီလိုလူတွေ ပါဝင်အောင် ကူညီပေးမယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုမှာဖြစ်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်အပေါ် အခြေခံပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဖြင့် တရားမဝင် ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပြီး တရားဝင် နေထိုင်သူတွေ အားလုံးကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်လက်ခံဖို့ အဆင်သင့် ရှိကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို နာမည်ထုတ်ဖော်ပြီး အတိအလင်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြန်လည်လက်ခံမယ်လို့ အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အနေနဲ့လည်း နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ချင်ရင် အတူပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာတွေ မီးရှို့ခံရတယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် စွပ်စွဲမှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အသံတွေ နားထောင်ပြီး ပြဿနာဇာစ်မြစ်ကို ရှာရမယ်လို့ ပြောလိုက်ခြင်းဖြင့် အချက်အလက် မခိုင်လုံဘဲ ၎င်းတို့ ပြောသလို တပ်မတော်ကို ရှုတ်ချရမယ်လို့ ပြောဆိုနေမှုတွေကိုပါ ပယ်ချခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ နိုင်ငံများ လူမျိုးများအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်ရေးကို ဦးတည်ပြီး ဖွဲ့စည်းကာ ရှေ့လျှောက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးလို ပဋိပက္ခကြီး ထပ်မံမဖြစ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ် ဆိုတာ အလေးအနက်ထား သတိပေးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့မီဒီယာများနဲ့ OIC နိုင်ငံများ အသိုင်းအဝိုင်းက UNGA မှာ ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စ အနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယားအရေးပြီးရင် ဒုတိယနေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ မွတ်ဆလင်များကို မြန်မာအစိုးရက ဖြေရှင်းရေးအဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကုလသမဂ္ဂမှာ ပြောကြားသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာတော့ ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သူတို့ပြောတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအကြောင်း တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ ရည်ညွှန်းပြောဆိုသွားခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်စ်တီလာဆန်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်ခွန်းကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီး အမေရိကန် အနေနဲ့ ဘာအကူအညီ ပေးရမလဲလို့ မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲက ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်ဆိုတဲ့ သူတွေကို ပြန်လက်ခံဖို့ဆိုတဲ့အပေါ် ယခင်က ချမှတ်ပြီးသား စိစစ်ရေးနည်းလမ်း (Verification Method) အတိုင်း စိစစ်လက်ခံသွားမယ်။ ဒီအပေါ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက လက်ခံအောင်နဲ့ သူတို့ဘက်က အစစ်ဆေးခံအောင်သာ နိုင်ငံတကာက ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းပေးကြဖို့ ပြောကြားခဲ့တာကိုကြည့်ရင် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း သွားမယ်ဆိုတာကို အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာပါပဲ။ အာနန် အစီရင်ခံစာမှာပါတဲ့ ထိုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သင့်ရင် ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အကြံပြုချက်အတိုင်း ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်း အရိပ်အမြွက် ပြသခဲ့ရာ ရောက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အနေနဲ့ ရခိုင်ဒေသက မွတ်ဆလင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းလို့ သုံးသွားတဲ့အတွက် ရိုလိန်ညာဆိုတဲ့ အမည်ကို လက်မခံခဲ့တာလည်း ပေါ်လွင်ခဲ့သလို မြန်မာကို ခြိမ်းခြောက်၊ ပြစ်တင်၊ အပုပ်ချတာတွေဟာ ဘာမှထိရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ အကျိုးမရှိဘူး၊ အကောင်းမြင် စိတ်သဘောနဲ့ ပူးပေါင်းကူညီပေးခြင်းကသာ ပြဿနာကို ပြေလည်စေနိုင်တယ်လို့ ပြည်ပကမ္ဘာမှာ အပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တာကို မြင်ရပါတယ်။
ဒီဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည် အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နှစ်နိုင်ငံအကြား သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်တဲ့ အချက်တွေကို အကြမ်းဖျင်း လေ့လာကြည့်ရင် ပထမတစ်ချက်က ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်တွေ အနေနဲ့ သူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ တင်ပြနိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မွေးခဲ့တဲ့ သက်သေခံ စာရွက်စာတမ်းပြနိုင်တဲ့လူတွေ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်အရေးကြီးဆုံး အချက်တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကို ပြန်လည်ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေ မဖြစ်ရမယ့်အပြင် သူတို့ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်ကို လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ပြန်လာချင်တဲ့လူတွေ ဖြစ်ရမယ် ဆိုတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချက်တွေလည်း အများကြီး ကျန်နေသေးတာမို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ဒီအချက်တွေနဲ့တင် သူတို့ကို ပြန်လက်ခံဖို့ ဆိုတာ အတော်လေးကို စိစိစစ်စစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်စဉ်းစားကြရမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် အစိုးရ အနေနဲ့လည်း ဒုက္ခသည်ဆိုသူတွေနဲ့ အချက်အလက် အတော်များများကို ထောက်လှမ်းစုဆောင်းထားရှိပြီးပြီလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က လူမှန်သမျှ မည်းမည်းမြင်ရာ ပြန်လက်ခံကြဖို့ ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ရခိုင်အကြမ်းဖက်ခံရမှုအတွက် ဘင်္ဂလားကို ကူညီမယ်လို့ မပြောပါဘူး။ ဘာထင်မြင်ချက်မှ မပြောခဲ့ပါဘူး။
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့က United Nations မှာလုပ်တဲ့ GA အစည်းအဝေးမှာ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ Bangladesh ဝန်ကြီးချုပ် Sheikh Hasina တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတုန်းကလည်း ဒေါ်နယ်ထရမ့် အနေနဲ့ ရခိုင်ကိစ္စကို ဘာထင်မြင်ချက်မှ မပြောခဲ့တာမို့ သူတို့ (United America-UA) အကူအညီ မရနိုင်တော့ဘူးလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ်က Reuters သတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေသွားခဲ့တာ မြင်ရပါသေးတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အနေနဲ့ သူတို့နိုင်ငံ အတွင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှုတွေအတွက် ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြရမယ့်အစား ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ ထောက်ခံမှုအားကိုသာ လိုက်တောင်းယူပြီး မြန်မာအစိုးရဘက်ကို ဖိအားတစ်ရပ် အနေနဲ့ ပြန်လက်ခံဖို့အရေး ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ဆိုရင် ဒီဒုက္ခသည်တွေ ဆိုတာကလည်း သူတို့နိုင်ငံဘက်က လူတွေသာ အများစု ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ဒါတွေအပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံအ နေနဲ့ပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ရိုဟင်ဂျာဆိုသူ ဒုက္ခသည်တွေကို လက်ခံကြဖို့ဆိုတဲ့ အရေးကို ခံစားနေရပြီး ဒီရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများထဲမှာ အယ်လ်ကိုင်ဒါ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပါကစ္စတန် အခြေစိုက် လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြုသူများ၊ တရားမဝင် လမ်းကြောင်းဖြင့် ငွေပို့/ယူ လုပ်နေကြသူများ ပါဝင်နေတာမို့ ဒုက္ခသည် အမည်ခံ ၄၀,၀၀၀ လောက်က အိန္ဒိယအစိုးရ နှင်ထုတ်တော့မယ်လို့လည်း စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က Al Jzaeera သတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာကို မြင်ရပါတယ်။
ဒီအတွက် ဖော်ပြခဲ့သမျှကို ပြန်ပြီးချုပ်လို့ နိဂုံးချုပ်လိုက်ရင် ယခုရက်ပိုင်း ကျင်းပနေတဲ့ UNGA အစည်းအဝေးကာလမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေနဲ့ အဆိုတင်သွင်း ကြိုးစားလာတော့မယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များ အရေးဆိုတဲ့ အရေးကို မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အကြား ထားရှိခဲ့တဲ့ 93MoU နဲ့သာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်အကြောင်း နိုင်ငံတကာ သံတမန် အသိုင်းအဝိုင်းကို ကြိုကြိုတင်တင် ချပြထားခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာ အရာမထင်တော့ဘဲ ကိုယ့်အတတ်နဲ့ ကိုယ်စူးသလို အလိမ်အညာတွေဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်လာတော့မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 11:35 AM No comments:
(Bungalow) ဆိုသည်မှာ လုံးချင်းတစ်ထပ်အခန်းကျယ်ဖြစ်သည်။ (Villa) ဆိုသည်မှာ (Bungalow) အခန်းကျယ်လေးများ သုံးခန်းတွဲ၊ လေးခန်းတွဲထားသည့် အဆောက်အဦတွဲကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ (Floor Type/ Building Type) ကတော့ ရှင်းသည်။ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦး ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(Bungalow Type) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဟိုတယ်ဖြစ်စေ၊ (Floor Type/ Building Type) ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ဟိုတယ်ဖြစ်စေ အခန်းဖွဲ့စည်းပုံ(အကျယ်အဝန်း) တူညီနေလျှင်ပင် အခန်းတွင်းအသုံးအဆောင် (Facilities) များဖြင့် အခန်းအဆင့်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြသည်။ အခန်းအကျယ်၊ မြင်ကွင်းကောင်းမွန်မှုနှင့် တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းမှု(အသံအနှောက်အယှက်ကင်းဝေးမှု)၊ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်မြင့်မားသည့် အခန်းတွင်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ပထမတန်းစား ဝန်ဆောင်မှု စသည်တို့ဖြင့် အခန်း၏အဆင့်ကို မြှင့်ထားတတ်ကြသည်။ ထိုသို့အခန်းများကို အဆင့်ခွဲခြားထားခြင်းဖြင့် အခန်းခနှုန်းထားများကို လွယ်ကူစွာပိုင်းခြားသတ်မှတ်နိုင်မည့်အပြင် မည်သို့သော (Customer) ကို (Target) ထားကြောင်း ဟိုတယ်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်၍ သိရှိနိုင် သည်။
တချို့ဟိုတယ်များက အခြေခံလူတန်းစား တည်းခိုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ တချို့ဟိုတယ်များ က အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအတွက် ဖြစ်သည်။ တချို့ဟိုတယ်ကြီးများက အပန်းဖြေခရီးထွက်သူများ၊ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များအတွက် ရည်ရွယ်သည်။ မည်သည့်ဧည့်သည် အမျိုးအစားကို ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သည်ဖြစ်စေ အခန်းများကိုတော့ အဆင့်လိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထား ကြသည်သာ ဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့် အခန်း(Categories)ကို (၅)မျိုးခန့်ခွဲခြားတတ်ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ
(၁) Cosy/ Economy/ Budget Room (၂) Standard Room (၃) Superior Room (၄) Deluxe Room (၅) Suite Room
တချို့ဟိုတယ်များတွင် (Cosy Room) ပါချင်မှ ပါသည်။ တချို့ဟိုတယ်များတွင် (Superior Room) ထည့်ချင်မှ ထည့်သည်။ အခန်းအရေအတွက်နှင့် ဟိုတယ်အပေါ်တွင် မူတည်၍ ခွဲခြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။ (Cosy Room) ထက် ဈေးသက်သာသည့် အခန်းအမျိုးအစားတစ်ရပ် ထားသည့် ဟိုတယ်တချို့လည်း ရှိသည်။ ဟိုတယ်အလိုက် နာမည်အမျိုးမျိုးပေးတတ်ကြသော်လည်း ကားဆရာများနှင့် ဧည့်သည်၏နောက်လိုက်တချို့အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခန်းခမှာ (Guest House)ခန့်သာ ဖြစ်သော်လည်း တချို့ဟိုတယ်များတွင်တော့ နံနက်ခင်း (Breakfast) အတွက်သာ အခကောက်သည်က များသည်။
(Standard Room) အမျိုးအစားကိုပင် ထပ်မံချဲ့ထား သည့် အခန်းအမျိုးအစားကိုမူ (Family Room) ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ မိသားစုလိုက်တည်းခိုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး သုံးယောက်ခန်း၊ လေးယောက်ခန်း၊ ငါးယောက်ခန်း စသည်ဖြင့် အသီးသီးရှိတတ်သည်။ (Deluxe) နှင့် (Suit) တွင်လည်း ဆင့်ပွားခွဲခြားတတ်သေးသည်။ (Junior Deluxe/ Junior Suite) စသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ တချို့အခန်းများက (View) အပေါ်တွင် မူတည်၍ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်သည်။ အခန်း(Category) တူစေဦး (View) ကောင်းသည့် အခန်းကို အခန်းခပိုတင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ (Suite) ကို (Duplex/ Business/ Penthouse/ Presidential) စသည်ဖြင့် ခွဲခြားထားကြသေးသည်။
(Businessmen's Suite) သည် (Internet) လိုင်းကောင်းရန် အထူးလိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံး (Suite Room) ကိုတော့ (Presidential Suite) ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ (Executive Room/ Floor) စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည့် (Category) တစ်မျိုးလည်း ရှိသေးသည်။ အထက်တန်းကျကျ သီးသန့်တည်းခိုလိုသူများ၊ (VIP) လူကြီးများအတွက် ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်၏ အခြေအနေနှင့် အခန်းအရေအတွက်ကိုမူတည်၍ (Facilities/Amenities) များ၊ သီးခြားဝန်ဆောင်မှု များဖြင့် ခွဲခြားကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
အခန်းများ၏ (Categories) ကို ခွဲခြားထားသလို အခန်းဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း ယခုကဲ့သို့ ခွဲခြား ထားသည်။
(၁) Single Room (၂) Twin Room (၃) Double Room (၄) Studio Room (၅) Handicapped Room (၆) Sample Room
(၇) Connecting Room (၈) Adjoining Room (၉) Adjacent Room (၁ဝ) Ground Floor or Top Floor Room (၁၁) Capsule Room စသည်ဖြင့် ခွဲခြားဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဧည့်သည်မှ အခန်း(Category) ရွေးချယ်ပြီးနောက် (Special Request) တောင်းဆိုတတ်သော အခန်းအခြေအနေများဖြစ်သည်။
(Single Room) သည် ယခုအခါတွင် ဟိုတယ်များ၌ မထားသလောက် ဖြစ်သည်။ လူဦးရေပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်သည်ဖြစ်၍ မကြာခဏ ဧည့်သည်နှင့် အထင်လွဲမှားမှုများ ဖြစ်ရသောကြောင့် တစ်ယောက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ နှစ်ယောက်နေသည်ဖြစ်စေ ဈေးနှုန်းတစ်မျိုးသာ သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဟိုတယ်များတွင် နှစ်ယောက်ခန်းနှင့် နှစ်ယောက်အထက် အခန်းများသာ ထားရှိတော့သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။
(Twin Room) သည် ကုတင်နှစ်လုံးပါသည့် နှစ်ယောက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်သည်မှ (Double Bed Room) ဟု မှားယွင်းတောင်းဆိုတတ်သည့် အခန်းဖြစ်သည်။ သေချာမေးမြန်း ကြည့်သည့် အခါမှာတော့ အမျိုးသားနှစ်ယောက် သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်သည်။ (တချို့တွေကတော့ အသေအချာပင် နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ပါသည့် အခန်းကို တောင်းဆိုခြင်းဖြစ် သည်။) ဧည့်သည်တောင်းဆိုလိုသည်မှာ ကုတင်နှစ်လုံးပါအခန်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် (Double Bed) တောင်းဆိုသော်လည်း မရနိုင်သည့် အခါများတွင် ကုတင်ပူးပေးရခြင်းများလည်း ရှိပါသည်။ အိပ်ယာနှစ်ခုပူးထားပါက (Hollywood Twin) ဟုခေါ်၍ ကြားတွင် (Site Table) ခြားထားပါက (Twin-apart) ဟု ခေါ်ဆိုကြောင်း ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးပါသည်။
(Double Room) မှာ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်တစ်လုံးသာပါသည့် အခန်းဖြစ်သည်။ (King Size/ Queen Size Bed) စသည်ဖြင့် ခွဲထားသော်လည်း ဟိုတယ်အများစုတွင် (King Size Bed) ကိုသာ အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ အထူးသဖြင့် (King Size Bed) ကို (Couple)များ၊ ကလေးငယ် ပါသည့် ဧည့်သည်များမှ တောင်းဆိုတတ်ကြသည်။
(Studio Room) မှာ နေ့ခင်းဘက်တွင် ဧည့်ခန်းအဖြစ်အသုံးပြု၍ ညဘက်တွင် အိပ်ခန်းအဖြစ် သုံးနိုင်သည့် အခန်းဖြစ်သည်။
(Handicapped Room) မှာ မသန်စွမ်းသူတို့တည်းခိုရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် သီးသန့် ပြင်ဆင် အခန်းဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
(Sample Room) မှာ နမူနာပြသရန် ပြင်ဆင်ထားသည့်အခန်းဖြစ်သည်။ (Agent)မှ ဖြစ်စေ၊ (Customer)များမှဖြစ်စေ (Inspection) လုပ်နိုင်ရန်အတွက် အသင့်ပြင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
(Connecting Room) မှာ အခန်းနှစ်ခုကို ဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးနိုင်သည့် တံခါးတစ်ချပ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် အခန်းဖြစ်သည်။
(Adjoining Room) မှာ ဘေးချင်းကပ်လျက် အခန်းဖြစ်၍ (Adjacent Room) မှာ အနီးအနား အခန်းကို တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
(Ground Floor or Top Floor Room) ကိုလည်း ဧည့်သည်များမှ (Request) လုပ်တတ် ကြသည်။ တချို့က ရှုခင်းကြည့်လို၊ အသံတိတ်ဆိတ်လိုသဖြင့် တောင်းဆိုတတ်သည်။ (Ground Floor) နှင့် (First Floor) ကိုလည်း မှားတတ်ကြသေးသည်။ (American) တို့က (Ground Floor) နှင့် (First Floor) အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ (British) တို့က (First Floor) ကို (Ground Floor) အထက်ထပ်မှ စ၍ ရေတွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ (British) တို့က စနစ်ကျခြင်းကို အခြေခံသည်။ (American) တို့က လွတ်လပ်လွယ်ကူခြင်းကို ပိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့် စကားလုံးအသုံးအနှုန်း၊ အသံထွက်များတွင် (American) တို့က အများအားဖြင့် ပိုတို၊ ပိုလွယ်နေတတ်ပါသည်။
(Capsule Room) မှာ (Capsule Hotel) များတွင်သာ ထားရှိသည့် အခန်းအမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ (Capsule Hotel) ကို ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာမြို့တွင်(၁၉၇၉) ခုနှစ်မှ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါမှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့ကြီးတွေမှာ မြင်တွေ့နေရပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် (Capsule Hotel) များသည် ယခုချိန်ထိတိုင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ခေတ်စားဆဲ၊ များပြားဆဲ ဟိုတယ်များဖြစ်ပါသည်။
(PS:ယခု ကျွန်တော်ရေးထားသည့် အကြောင်းအရာလေးသည် ဟိုတယ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာလေးများကို သိရှိလိုသည့် ညီငယ်၊ ညီမငယ်လေးများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တတ်သိလွန်း၍ ရေးသားခြင်း မဟုတ်ဘဲ တတ်သမျှ၊ သိသမျှလေးများကို (Knowledge Sharing) လုပ်လိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း လူသားတစ်ဦးဖြစ်၍ မှတ်သားထားသည်များ၊ သိမှတ်ထားသည်များမှာ လွဲမှားခြင်းများလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာလွဲမှားနေသည် သို့မဟုတ် အယူအဆမတူ ရှိနေသည့် အကြောင်းအရာ ရှိနေသည်ဆိုပါလျှင် (Comment) တွင် ရေး၍ ဝေဖန်ထောက်ပြစေချင်ပါသည်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းထဲတွင်ရှိသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် (Hotel Life) ထဲရှိ အစ်ကို၊ အစ်မများအားလုံးအား လေးစားစွာ တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာမှတ်သားကြမည့် ညီငယ်၊ ညီမငယ်များ အမှတ်မှားသွားမည်ကို စိုးရိမ်၍ ဖြစ်ပါသည်။)
(၂၃.၉.၂ဝ၁၇ နံနက် (၉း၂၅)မိနစ်)
Posted by Alex Aung at 10:07 AM No comments:
ရိုဟင်ဂျာ (Rohingha) ဆိုသည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုး၏ အမည်မဟုတ်
ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ စစ်တကောင်းခရိုင်၊ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတို့၏ နေ့စဉ်သုံးစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းစကားစုနှင့်ပတ်သက်၍ ပါယာဂျာ၊ ကွန်ပါယာဂျာဆိုသည့် စကားလုံးတို့ကို လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုသည်။ “ပါယာဂျာ”ဆိုသည်မှာ “ရွာသား” ဖြစ်သည်။ “ကွန်ပါယာဂျာ” ဆိုသည်မှာ “ဘယ်ရွာသားလဲ” ဟု မေးခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့်စကားလုံးတွင် “ရိုဟင်”ဆိုသည်မှာ “ရွာဟောင်း”ဖြစ်ပြီး “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသည်မှာ “ရွာဟောင်းရွာသား” ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့အနီးမှာ ရိုဟင်ဂျာရွာဟူ၍ ရှိပါသည်။ ရွာဟောင်းရွာ ဖြစ်သည်။ မြောက်ဦးမြို့ကို ဈေးဝယ်ရန် ရောက်လာသော ရိုဟင်ဂျာ ရွာသားများကို “ကွန်ပါယာဂျာ” ဟု မေးလျှင် “ရိုဟင်ဂျာ” ဟု ဖြေဆိုကြပါသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ “ဘယ်ရွာသားလဲ” ၊ “ရွာဟောင်းရွာသားပါ” ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုး၏အမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့် သက်ဆိုင်သောစကားလုံး မဟုတ်ကြောင်း အခိုင်အမာ သိမှတ်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
“ရိုဟင်ဂျာ ဘယ်တုန်းက စခဲ့သနည်း” ဆိုသည့် မေးခွန်းအတွက် အဖြေရဖို့ရန် သမိုင်းအထောက်အထားများစွာကို လေ့လာကြည့်ရှုရာ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်စပ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ၁၈၂၄-၂၆ ခုနှစ် (အင်္ဂလိပ်+မြန်မာ-ပထမစစ်ပွဲအပြီး နောက်ပိုင်းကာလ)၌ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများ အတားအဆီးမဲ့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။
၁၈၉၉-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ (စူးအက်တူးမြောင်း ဖွင့်ပြီးချိန်ကာလ)တွင် အင်္ဂလိပ်များက မြေရိုင်းဝေငှသည့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန်စပါးများ ပြည်ပသို့ ပိုမိုတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရန် စီမံကိန်းချမှတ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ချက်အရ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံမြို့နယ်များသို့ ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် ဝင်ရောက်နေထိုင်စေခဲ့သည်။
၁၉၄၂-ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ကူးစက်လာပြီး ရခိုင်နှင့် ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများ လက်သို့ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှ ကျန်ခဲ့သော လက်နက်ခဲယမ်းများ ရောက်ရှိခဲ့လေရာ ယခင်ကတည်းက အဆင်မပြေဖြစ်နေသော ၎င်းတို့နှစ်ဖက်ကြား လက်နက်အားကိုး၍ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။ ပဋိပက္ခအစပိုင်းတွင် ကျောက်တော်မြို့နယ်တစ်ဝိုက်၌ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့က အားသာခဲ့သော်လည်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့နယ်များ၌ ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများက အရေးသာသွားခဲ့လေသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြသော ရခိုင်၊ သက်၊ ဒိုင်းနက် လူမျိုးစုများမှာ အိုးအိမ်များစွန့်၍ ထွက်ပြေးခဲ့ရလေသည်။ တစ်နည်းဆိုသော် ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများ၏ ဝါးမျိုခြင်းကို ခံလိုက်ရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ (မူစလင်များဖြစ်ကြသည်။)
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများ၏ ယင်းကဲ့သို့ သက်ဆိုးရှည်နေသော ပဋိပက္ခကို ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်က ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာပြည်ပြန်ဝင်လာချိန်ကာလတွင် စစ်အတွင်းကာလက အိန်္ဒိယသို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သော ရခိုင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ပြန်ဝင်မလာနိုင်စေရန် ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများက အပြင်းအထန် တားဆီးခဲ့ကြလေသည်။
၁၉၄၈-ခုနှစ်(မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ရပြီးသောကာလ)တွင် ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများက ၎င်းတို့၏ လူဦးရေအများအပြားနေထိုင်သော ဘူးသီးတောင်ကို “မူစလင်ပြည်နယ်အဖြစ်” သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုလာရာမှ အကြမ်းဖက်မှု စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့လှုပ်ရှားတောင်းဆိုရာတွင် မောင်းတောမြို့နယ် ကျောက်ငနွားရွာသား အဗ္ဗဒူဟာဆင် အမည်ရှိသူ ကုလားတစ်ဦးက ခေါင်းဆောင်ခဲ့သည်။
လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုအဆင့်သို့ “မူဂျာဟစ်” အမည်ဖြင့် စတင်တက်လှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကို အခြေခံ၍ စည်းရုံးမှုများကြောင့်လည်းကောင်း၊ အခြေအနေမဲ့များကို စည်းရုံးရသဖြင့် စုစည်းမှု လွယ်ကူခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း တစ်နှစ်အတွင်း မူဂျာဟစ်အင်အား ခုနှစ်ရာကျော်အထိ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ယင်းမူဂျာဟစ်သူပုန်များကို အမှတ်(၅) ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်းက စတင် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ၁၉၅၁-၅၂ ခုနှစ်များတွင် မေယုစစ်ဆင်ရေးဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၄-ခုနှစ်တွင် မုတ်သုံစစ်ဆင်ရေးဖြင့် လည်းကောင်း ထိုးနှက်တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းခဲ့ကြသည်။
မူဂျာဟစ်များသည် မြန်မာ့ပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်း အခိုင်အမာ တပ်စွဲနေနိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ တစ်ဖက်နိုင်ငံနယ်စပ်သို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြရသည်။
ထိုအချိန်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ-မဖြစ်သေးသော ပါကစ္စတန်အစိုးရကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ထွက်ပြေးလာသော ကုလားဆိုးသောင်းကျန်းသူ မူဂျာဟစ်သူပုန်များကို ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ၁၉၅၄-ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စစ်တကောင်းရဲအဖွဲ့က အဗ္ဗဒူဟာဆင်ကို ဖမ်းဆီးရမိသွားခဲ့သည်။
၁၉၇၁-ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ပါကစ္စတန်အစိုးရက “ရှိတ်မူဂျီယာမန်”ကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန်ပြည်တွင်းရေးမှာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်။ အရှေ့ပါကစ္စတန်(ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်)နယ်စပ်မှ ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများသည် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ထပ်မံ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြန်ပါသည်။ ၁၉၆၂-ခုနှစ် နောက်ပိုင်းအထိ တရားမဲ့ဝင်ရောက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြလေသည်။
အမှန်စင်စစ် ယင်းတို့သည် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ရပ်တည်မှုနယ်မြေရရှိရေး (ခ) မူစလင်ပြည်နယ်ရရှိရေးကို လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေသူများသာ ဖြစ်သည်။
နယ်စပ်ဒေသရှိ မြန်မာ့နယ်မြေအတွင်း ကုလားဆိုးသောင်းကျန်းသူများ ဝင်ရောက်မှုများကို တားဆီးနိုင်ရန် မြန်မာ့တပ်မတော်က စစ်ဆင်ရေးများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၁၉၅၇-ခုနှစ်တွင် “ရှော်မလုပ်”နှင့် “ဇူရာသန်”တို့ ဦးစီးသော အင်အား (၁၅၀)သည်လည်းကောင်း၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ တွင် “ရာရှစ်” ဦးဆောင်သော အင်အား (၂၁၄)ယောက်တို့သည်လည်းကောင်း အသီးသီး လက်နက်ချ အလင်းဝင်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အများစု လက်နက်ချခဲ့သော်လည်း ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူခေါင်းဆောင် ဇော်ဖော့(ကာဆင်အဖွဲ့ဝင်)သည် လက်နက်မချဘဲ နောက်လိုက်အင်အား(၂၀)ခန့်ဖြင့် ဆက်လက် လှုပ်ရှားနေခဲ့ရာ ၁၉၆၃-ခုနှစ်အရောက်တွင် အင်အား(၅၀၀)အထိ စုဆောင်းမိသွားခဲ့သည်။
၎င်းအချိန်တွင် “အဘူဆီဒိတ်”ဦးစီးသော ကုလားဆိုးသောင်းကျန်းသူ အင်အား(၄၀)ခန့်အဖွဲ့နှင့် “အနုဇော်လီ” ဦးစီးသော အင်အား (၈၀)ခန့်အဖွဲ့တို့က သီးခြားရပ်တည် လှုပ်ရှားခဲ့ကြလေသည်။
မူစလင်ပြည်နယ်ရရှိရေး လှုပ်ရှားတောင်းဆို၍ မရနိုင်ကြောင်း သိရှိလာသောအခါတွင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဟန်ဆောင်ကာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ဝါဒဖြန့် လှုပ်ရှား တောင်းဆိုလာကြခြင်းဖြစ်သည် ဆိုတာကို သတိပြုကြရပေမည်။
ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူဇော်ဖော့သည် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို “ရိုဟင်ဂျာပြည်နယ်ထူထောင်ရေး၊ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး” ကြွေးကြော်သံများဖြင့် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သော “ရိုဟင်ဂျာ=ရွာဟောင်းရွာသား” ဆိုသောအမည်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ “၎င်းတို့သည် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ဖြစ်သည်” ဟုဆိုကာ ၎င်းတို့၏ “ရိုဟင်ဂျာပြည်နယ် ထူထောင်ရေး၊ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး”လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၇၁-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အရှေ့ပါကစ္စတန်အရေးအခင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၎င်းအရေးအခင်းကာလအတွင်း ၎င်းအရေးအခင်းကြောင့် နယ်စပ်ဒေသမှ ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူများအတွက် မှောင်ခိုလက်နက် ဝယ်ယူရရှိမှုလမ်းစ ပွင့်သွားခဲ့ပြန်သည်။ ၎င်းအခြေအနေကို အစပြုပြီး လက်နက်ကိုင်အင်အား (၂၀၀)ခန့်အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
၁၉၇၁-ခုနှစ်တွင်ပင် အရှေ့ပါကစ္စတန်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အနောက်ပါကစ္စတန်မှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံတည်းမှ နိုင်ငံ(၂)နိုင်ငံအဖြစ် ကွဲသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့သည် ၁၉၄၈-ခုနှစ်မတိုင်မီကာလတုန်းက အိန်္ဒိယနိုင်ငံပိုင် ပြည်နယ်များ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အိန်္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရထံမှ ခွဲထွက်ခွင့်အရေးဆိုပြီး သီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ထူထောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၇၂-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဇော်ဖော့သည် အကွဲကွဲဖြစ်နေသော ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူများကို စုစည်း၍ ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)ကို စုစည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းပါတီတွင် ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူဇော်ဖော့က ဥက္ကဋ္ဌနှင့် စစ်ရေးတာဝန်ခံ၊ အဘူဆီဒိတ်က ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘီအေဇော်ဖော့က အတွင်းရေးမှူး၊ ဇော်လဝီမူဇေက ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ကြသည်။
ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)သည် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဗောဂလိရွာတွင် အခြေချ ခိုအောင်းနေထိုင်ခဲ့သည်။ အင်အား(၅၀၀)ကျော်အထိ တိုးပွားလာခဲ့သည်။
ယင်းတို့ကို မနှစ်မြို့သော ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများက မြန်မာ့တပ်မတော်ကို သတင်းပေး တိုင်ကြားချက်များအရ မြန်မာ့တပ်မတော်က စစ်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၇၄-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကုလားဆိုးသောင်းကျန်းသူ ဇော်ဖော့နှင့် နောက်လိုက်(၆၀)တို့သည် တစ်ဖက်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံသွားခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ပြိုကွဲသွားသော ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူများကို ပြန်လည်စုစည်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း အတွင်းရေးမှူး ဘီအေဇော်ဖော့နှင့် သဘောထားကွဲလွဲခဲ့ရာမှ ဥက္ကဋ္ဌဇော်ဖော့ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီး ဘီအေဇော်ဖော့သာ ပေါ်လွင်လာခဲ့လေသည်။ ဘီအေဇော်ဖော့သည် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်းရွာဇာတိ ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်မှ ဘီအေဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဘီအေဇော်ဖော့သည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ) အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံ ဘာ့စ်ပါရ်၌ ရိုဟင်ဂျာမျိုးချစ်တပ်ဦး (RohinghaPatriotic Front = RPF) ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။
ဘီအေဇော်ဖော့(B.A Zafur)က ဥက္ကဋ္ဌ၊ နူရ်းအစ္စလာမ် (Nutum Islam)က ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ မိုဟာမက်ရှော်ဖီက အတွင်းရေးမှူး၊ ဇော်ကရီးယားနှင့် ဒေါက်တာယူနိမ့်စ်(Dr.Unus)က ဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ် ပါဝင်၍ အင်အား(၇၀)ခန့် ရှိခဲ့သည်။ ယင်းတို့၏ စည်းရုံးမှုကြောင့် ၁၉၇၅-ခုနှစ်တွင် ခေါ်တောကုလားလူငယ်အချို့ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားလူငယ်အချို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်၍ ယင်းအဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြသည်။
ယင်းအဖွဲ့သည် တစ်ဖက်နိုင်ငံ၌ အခြေပြု၍ ထွက်ပြေးလာသော ကုလားများကို အကြောင်းပြုပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ရာ ၁၉၇၈-ခုနှစ်တွင် ပိုမိုသွက်လက်ခဲ့လေသည်။
၁၉၇၈-ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဘီအေဇော်ဖော့သည် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပြို (Taungbro) ဒေသအထိ စိမ့်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့လေသည်။
တစ်ဖက်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသကို အခြေပြု၍ လှုပ်ရှားနေသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ကုလားဆိုးသောင်းကျန်းသူများအဖွဲ့မှာ-
(က) ရိုဟင်ဂျာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (Rohingha Soliderity Organization = RSO)
(ခ) ရိုဟင်ဂျာမျိုးချစ်တပ်ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)
(ဂ) အာရကန်ရိုဟင်ဂျာအစ္စလာမ်မစ်တပ်ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)
(ဃ) ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးပါတီ (Rohingha Liberation Party)
(င) ရခိုင်ပြည်အီတီဟာဒူမူဂျာဟစ်အဖွဲ့ (Itihadul Mojahadin of Arakan = IMA) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဖော်ပြပါ ရိုဟင်ဂျာစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (Rohingha Soliderity Organization = RSO) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာယူနိမ့်စ်၊ စစ်ရေးတာဝန်ခံ ဇော်ကရီးယားတို့ဦးဆောင်၍ အင်အား (၃၀၀)ခန့်ဖြင့် တစ်ဖက်နိုင်ငံ အူခီးယား(Ukhia)မြို့နယ်၊ မောဇီရှပ်ရွာအနီး ဒိုင်ကြာ သီးစခန်းနှင့် ရာမူး(Ramu)မြို့နယ်၊ အူနာပါရွာ အရှေ့ဘက်တစ်မိုင်ခန့်တွင် စခန်းများ တည်ဆောက်ဖြန့်ခွဲ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းအဖွဲ့အတွက် လက်နက်များကို ကမ်ပူးချားနယ်စပ် လက်နက်မှောင်ခိုဂိုဏ်းထံမှ ရရှိနေခဲ့ပြီး အာရပ်နိုင်ငံများ၊ တူရကီနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ အသီးသီးတို့ထံမှ တိတ်တိတ်ပုန်းထောက်ပံ့သည့် ရန်ပုံငွေများကို ရရှိနေခဲ့သည်။
အာရကန်ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF) တွင် ဥက္ကဋ္ဌနာရူးအစ္စလာမ် ခေါင်းဆောင်၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံ၊ နတ်ချောင်းစရီမြို့နယ်၊ ဇွိုင်လာဘူရီရွာတွင် စခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်၍လည်းကောင်း၊ အူခီးယားမြို့နယ်၊ ဟေဇေလျ (Hayzelong)တွင် စခန်းများတည်ဆောက်၍လည်းကောင်း လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ ဌာနချုပ်ရုံးကို ဟော်လီမာလာရွာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်။
၎င်းအဖွဲ့တွင် အင်အား(၁၀၀)ခန့်သာရှိပြီး ၁၉၉၁-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ၎င်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နာရူးအစ္စလာမ်သည် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ စစ်ရေးမဟာမိတ် ပြုလုပ်ရန်နှင့် လက်နက်တင်သွင်းရေး ကိစ္စများကို ညှိနှိုင်းခဲ့သည်။
၎င်းအပြင် နာရူးအစ္စလာမ်ဦးစီးသော အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အား ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ရောက်နေသူ တောင်ကုတ်ဇာတိ (ABYMU) ရဟန်းပျိုအဖွဲ့နာယက ဦးခေမာစာရက ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း အဖွဲ့သို့ ဝင်ခွင့်ပြုခဲ့လေသည်။
ရိုဟင်ဂျာမျိုးချစ်တပ်ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)သည် ရိုဟင်ဂျာ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (Rohingha Soliderity Organization = RSO)နှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး အာရကန် ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၈၉-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အတွင်း ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် နူးရ်အစ္စလာမ်၊ ရှော်ဖီဟူစိန်နှင့် ဒေါက်တာယူနိမ့်စ်တို့ သဘောထားကွဲလွဲ၍ အာရကန်ရိုဟင်ဂျာ လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)နှင့် ခွဲထွက်အဖွဲ့(ခေါ်) ရိုဟင်ဂျာမျိုးချစ်တပ်ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF) အဖွဲ့ဟူ၍ အသီးသီး ကွဲပြားခဲ့ကြရသည်။
ရိုဟင်ဂျာ မျိုးချစ်တပ်ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)တွင် ရှော်ဖီဟူစိန်ဦးစီး၍ အင်အား(၂၀)ခန့်ဖြင့် စစ်တကောင်း၌ အခြေပြုကာ အဖွဲ့အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းအဖွဲ့-ရန်ပုံငွေရရှိရေးအတွက် ရိုဟင်ဂျာမျိုးချစ်တပ်ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF) ဗဟိုကော်မတီဟောင်း ဆွေဂျက်က တက္ကဆပ်နယ်တွင် အလှူငွေများ ကောက်ခံပေးလျက် ရှိခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာလွတ်မြောက်ရေးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)အား ဖော်လိပ်မူဇာမာန်မှ ခေါင်းဆောင်လျက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံ၊ ကော့ဘဇား(Cox’s Bazar)ခရိုင်၊ တန်ခါလီ (Tinkhali) အနီးတွင် စခန်းတည်ဆောက် အခြေပြုလျက် အင်အား (၂၀)ခန့်ဖြင့် ရှိခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်အီတီဟာဒူမူဂျာဟစ်အဖွဲ့ (Itihadul Mojahadin of Arakan = IMA)အား မော်လဝီဟာနစ် (Maulvi Hanif) ဦးစီး၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံ အူခီးယားမြို့နယ်၊ ဂူနာမန်နာရွာတွင် စခန်းတည်ဆောက် လှုပ်ရှားလျက် အင်အား(၂၀)ခန့်ဖြင့် ရှိခဲ့သည်။
လူမျိုးရေးကို အခြေခံဖွဲ့စည်းထားသော တစ်ယူသန် ကုလားဆိုးအဖွဲ့များသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံများမှ ပေးစာကမ်းစာများကို မျှော်ကိုးအားထားနေပြီး မိမိတို့နေထိုင်ရာ ဒေသတွင် လုံ့လထုတ် လုပ်ကိုင်စားသောက်လိုစိတ်မရှိဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ အချောင်ရမည့် နည်းလမ်းကိုရွေး၍ “မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက မူစလင်များအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ဗလီများအား ဖျက်ဆီးနေကြောင်း၊ မူစလင်အမျိုးသမီးများအား မုဒိမ်းကျင့်နေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် နေထိုင်ခွင့်မပြုဘဲ မောင်းထုတ်နေကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်မြေအတွင်း မူစလင်ဒုက္ခသည်ပေါင်း များစွာ ရောက်ရှိနေကြောင်း” လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်လျက် ရှိခဲ့ကြလေသည်။
ယင်းတို့၏ လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ချိမှုများကို အခြေခံ၍ ပြည်ပ အင်အားကြီးနိုင်ငံများကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်၍ တက်ကြွသော ကြားနေနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒများကို ထိပါးလာခဲ့ကြသည်။ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကို အခြေခံ၍ နိုင်ငံအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုပါ ပျက်ပြားရလေအောင် ဇောင်းပေးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က အဆိုပါဝါဒဖြန့်ချိမှုများကို ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သည့်အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံကြီးများ၏ မှားယွင်းစွာ၊ တစ်ဖက်သတ်၊ သိရှိနားလည်ခြင်းများကို အချိန်မီ ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
အဆိုပါ ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူများသည် ၁၉၆၀-ခုနှစ်၊ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အရှင်းအရ နေရာတစ်ခုရရှိရေး မျှော်လင့်ချက် ရရှိမှုကို အခွင့်ကောင်းယူခဲ့ကြပြီး တိုင်းရင်းသားဖြစ်သည့် ရခိုင်များနှင့် မွန်များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သည့် ခေါ်တောကုလားများ (ခ) ဘင်္ဂလီကုလားများဖြစ်ပါလျက် “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး” ဆိုသည့် သမိုင်းလိမ် အမည်တစ်ခုဖြင့် “ရိုဟင်ဂျာပြည်နယ် သီးခြားရရှိရေး” စတင် လှုပ်ရှားခဲ့ကြလေသည်။
ဆက်လက်၍လည်း အစဉ်တစိုက် ဆက်လက်လှုပ်ရှား တောင်းဆိုခဲ့ကြလေသည်။
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူများသည် တစ်ဖက်နိုင်ငံအတွင်း အခြေချ ခိုအောင်းနေထိုင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အကြောင်းပြ၍ နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာသစ် ဖွင့်လှစ်လျက် တိုက်ကွက်ဖော်နေခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့၏ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘဲ တိုင်းရင်းသားဟန်ဆောင် လှုပ်ရှားနေသည့် လုပ်ရပ်များသည် အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်လည်း ဆက်စပ်ပတ်သက်မှု ရှိနေခဲ့ကြသည်။
ဆန့်ကျင်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ရေရှည်မဟာဗျူဟာနှင့်လည်း ဆက်စပ်ပတ်သက်မှု ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ လိမ်လည် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှုများသည် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားတို့ မျှော်လင့်နေသော အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ညီအစ်ကိုများ၏ ရပိုင်ခွင့်များကိုပါ ခြိမ်းခြောက်လျက် ရှိနေခဲ့ကြသည်။
သမိုင်းအစဉ်အဆက် အေးအတူ-ပူအမျှ နေထိုင်လာခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုတို့ ပိုင်စိုးရာနယ်မြေ(မြန်မာနိုင်ငံ)အတွင်း၌ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ကုလားဆိုး သောင်းကျန်းသူများ အမှန်တကယ် ရှိသင့်/ မရှိသင့်၊ ရိုဟင်ဂျာအမည် အသက်သွင်းမှု၊ ရိုဟင်ဂျာအမည် သုံးနှုန်းခေါ်ဆိုမှုတို့ကို လက်ခံသင့်/မသင့်ဆိုသည်တို့ကို အမှန်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ၎င်းတို့၏ ဖြစ်တည်လှုပ်ရှားမှုများက ဖတ်ရှုသုံးသပ်သူတို့အား ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်စေရန် သက်သေခံအဖြစ်ဖြင့် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ပေးကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါသတည်း။
Credit: ဆည်းဆာသစ်´s Page
Posted by Alex Aung at 11:50 AM No comments:
ချင်းတွင်းမြစ်ရေပြင်ပေါ်ကို အိမ်ဆောက်ပြီး နေကြတဲ့ဘ၀တွေ ( သို့မဟုတ် ) ချင်းတွင်းဆလုံများ
ချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာ ဒီလို ဖောင်အိမ်လေးတွေ တွေ့ရစမြဲ ။ အထူးသဖြင့် ဟုမ္မလင်းနယ်နဲ့ ခန္တီးနယ်ကြားမှာပေါ့။ စိတ်ဝင်တစားရှိလှပေမယ့် သူတို့ရဲ့ဘ၀သူတို့ရဲ့ နေထိုင်မှုတွေကို မေးမြန်းဖို့က အခွင့်မသာ။ ချင်းတွင်းမြစ်ထဲကို နေပူပူကျက်ကျက်အောက်က မြစ်ပြင်ကိုဖြတ်လာတဲ့ လေအေးတွေကို ခံစားရတိုင်း၊ သည်းသည်းထန်ထန်ရွာတတ်တဲ့ မိုးရေတွေ၊ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေအတူ ဖြတ်သန်းတဲ့အခါတိုင်း ၊ နှင်းစက်လေးတွေက မျက်နှာကို လာစဉ်ရင် အေးစက်စက်ရာသီဥတုနဲ့ နှင်းဖွေးဖွေးတွေ ပိတ်နေအောင်ကျနေတဲ့ မနက်ခင်းကို ဖြတ်သန်းခဲ့တိုင်း ဖောင်အိမ်လေးတွေဆီကို စိတ်က ရောက်လာတတ်စမြဲ။ တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်တဲ့ မြစ်ရေ၊ မြစ်ကမ်းခြေကို ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းစွာ တိုက်ခတ်တတ်တဲ့ လေပြင်း၊ နှင်းမိုးသည်းသည်းနဲ့အတူ လိုက်ပါလာတဲ့ အအေးဒဏ်စတဲ့ လောကဓံတရားနဲ့အတူ ချင်းတွင်းမြစ်ပြင်ပေါ်မှာ ချင်းတွင်းမြစ်ကြီးနဲ့ အတူတကွ ခံစားကြရတဲ့ ဖောင်အိမ်က မိသားစုတွေရဲ့ဘ၀ကို အခွင့်အခါသင့်တုန်း မေးမိတာပေါ့လေ။ ချင်းတွင်းမြစ်ပေါ်က သောင်ပြင်ပေါ်က ဘ၀တွေက ပွင့်လင်းရာသီမှာသာ တွေ့ရတတ်ပေမယ့် ဖောင်အိမ်လေးတွေနဲ့နေတဲ့ ချင်းတွင်းဆလုံလို့ လူအများ ခေါ်နေကြတဲ့ သူတို့ကတော့ ရာသီမရွေး တွေ့မြင်နေရတတ်ပြီး သူတို့ဘ၀ကို ထိန်းကျောင်းဖြတ်သန်းနေကြရတာပေါ့။
“ဒီမှာနေလာတာ အနှစ် ၃၀ ကျော်ပြီလေ။ မိဘတွေနဲ့အတူ လေးနှစ်သမီးအရွယ်ကတည်းက ဒီပေါ်မှာနေလာတာ အိမ်ထောင်ကျပြီး အခုချိန်အထိပဲ” လို့ အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ် ဒေါ်သန္တာဝင်းက ပြောပါတယ်။ သူမဘ၀မှာ ယနေ့အချိန်အထိနေခဲ့တဲ့ အိမ်ဆိုသည်မှာ အများသူငါကဲ့သို့ ကုန်းမြေပေါ် ဆောက်ထားသော အိမ်မဟုတ်၊ ၀ါးဖောင်ပေါ် အိမ်ဆောက်ပြီး ရေပေါ်တွင် နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝါးဖောင်ပေါ် အိမ်ဆောက်ပြီး နေထိုင်ကြသော မိသားစုများကို ချင်းတွင်းမြစ်ရိုးတစ်လျှောက် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ သူတို့ကို ချင်းတွင်းဆလုံတဲ့လေ။ “အစ်မတို့က မုံရွာကျောက္ကာ ဇာတိပါ။ ဟိုမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်မပြေလို့ မြေပဲနုတ်ဆိုပြီး ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မိဘတွေနဲ့ ဒီဘက်ရောက်လာတာ။ ဒီကလူနဲ့ပဲ အိမ်ထောင်ကျပြီး မပြန်ဖြစ်တော့ဘူးလေ။ ဒီမှာက လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်။ သမီးကြီးကတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး မုံရွာနယ်ဘက် ပြန်ရောက်သွားပြီ။ အစ်မတို့ကတော့ ဒီမှာပဲဆက်နေပြီး ကျန်ခဲ့တာပေါ့” ဟု ဒေါ်သန္တာဝင်းက ပြောပြပါတယ်။ သူမမျက်လုံးတွေက အိမ်အပြင် မြစ်ပြင်ဘက်ကို ငေးကြည့်ရင်းပေါ့။ သူမတို့လို ၀ါးဖောင်ပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်ပြီးနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးက ရွှေ့ပြောင်းတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တချို့က မုံရွာနယ်ဘက်၊ တချို့က မန်းလေးနယ်ဘက်ကနဲ့ တချို့ဆို ရန်ကုန်ဘက်ကပင် ပါလိုက်သေး။ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရှာဖွေစားသောက် လုပ်ကိုင်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ ချင်းတွင်းမြစ်ရေ နောက်ကျိကျိပေါ်မှာပဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး ဘ၀ကို တည်ဆောက်နေကြရတာပေါ့။ ချင်းတွင်းရေ နောက်ကျိကျိသောက်မိ၍ မပြန်နိုင်ဆိုတာ သူတို့တစ်တွေလား။
ချင်းတွင်းမြစ်ပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်ပြီး နေကြတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်ဆိုတာ ၀ါးဖောင်ပေါ်မှာ ရုံးမိုးဝါးကပ်ကာထားသော အိမ်ဟု မည်ကာမတ္တခေါ်နိုင်သော တဲသာသာ အိမ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထုထည် တစ်တောင်ကျော် လောက်ရှိပြီး ခန့်မှန်းခြေ ၀ါးအတိုအရှည် အလုံး ၁၀၀ ကျော်လောက်ကို ကြိမ်ကြိုးတွေနဲ့ တုပ်နှောင်ပြီး ၀ါးဖောင်ဖွဲ့ထားရတာပေါ့။ အဲဒီဝါးဖောင်ပေါ်မှာ လေးဝါးလို့ ဒေသခံတွေခေါ်တဲ့ ၀ါးကြီးကြီးတွေကို ကွဲထွက်မသွားအောင် အပြားလိုက်အစိတ်စိတ်လေးတွေ ပြုလုပ်ပြီး ကြမ်းခင်းအဖြစ် ခင်းထားရပါတယ်။ ဒီလိုခင်းထားတဲ့ ကြမ်းခင်းတွေကို ချင်းတောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ တောင်ယာတဲတွေမှာလည်း ကြမ်းခင်းအဖြစ် အသုံးပြုကြတယ်လေ။ ရေပေါ်ပေါ်နေတဲ့ ဒီလိုကြမ်းခင်းအပေါ်မှာ လူတစ်ရပ်သာသာအမြင့်ရှိတဲ့ တဲအိမ်လေးကို ရုံးဖြင့်မိုးပြီး ၀ါးကပ်ကာဖြင့်ကာထားတဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ ဒေါ်သန္တာဝင်းတို့ မိသားစုငါးယောက် နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မလုံ့တလုံဖြစ်နေတဲ့ အိမ်လေးရဲ့ အချို့နေရာမှာတော့ မိုးကာစဖြင့် ကာရံထားရတာပေါ့လေ။
အိမ်လေးထဲမှာတော့ အခန်းသုံးခန်းကို ၀ါးကပ်နဲ့ပဲ ကန့်ထားပါတယ်။ အိမ်လေးရဲ့ ခေါင်းရင်းအမြင့်ဘက်မှာတော့ ဘုရားပန်းအိုးတစ်လုံး၊ ဆင်းတုတော်တစ်ဆူနဲ့ အောက်ဘက်မှာတော့ ခြင်ထောင်ကိုလုံးထွေးပြီး စောင်ခေါက်ထားသော အိပ်ရာခင်းတစ်ခု၊ အဲဒီဘေးမှာတော့ စားပွဲတစ်လုံး၊ တီဗွီအသေး၊ စီဒီစက်တစ်လုံး ဘက်ထရီအိုးအသေး တစ်လုံး သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ့လေ။
အဲဒီအိပ်ရာခြေရင်းမှာတော့ ခွေးနှစ်ကောင်က အိပ်လျက်သား၊ ခြေရင်းဘက် ကန့်ထားသောအခန်းထဲတွင် သံသေတ္တာလေးလုံးနဲ့ မီးဖိုချောင်တို့ကို အတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပါတယ်။
“ဒီအိမ်က အခန်းသုံးခန်းပါပြီး တခြားအိမ်တွေထက်ကျယ်တယ်။ ဒါဝယ်တုန်းက တစ်သိန်းခွဲပေးရတယ်။ သုံးနှစ်တစ်ခါဝယ်ပြီး နေရတယ်။ သုံးနှစ်ကျော်ရင် နေလို့မရတော့ဘူး” ဟု ဒေါ်သန္တာဝင်းက ပြောပြပါတယ်။ သူမပြောတဲ့ တခြားအိမ်ဆိုတာ သူမတို့လိုပဲ ၀ါးဖောင်ပေါ်မှာနေကြတဲ့ သူတို့လို အခြားအိမ်တွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့ အိမ်ဘေးမှာ ၀ါးဖောင်ပေါ်က အိမ်မှာပဲနေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစု ၁၀ စုလောက်ရှိပါတယ်။
“ယောက်ျားက ဆိပ်ကမ်းမှာ ကုန်ထမ်းတယ်။ သားကြီးက အမြန်ယာဉ်မှာ လူခေါ်ပေးတယ်။ သားကြီးက ၁၄ နှစ်ရှိပြီ။ ကျောင်း မနေချင်တော့ဘူးဆိုလို့ ထွက်ခိုင်းလိုက်တာ။ အငယ်နှစ်ယောက်က ကျောင်းတက်နေတယ်။ အစ်မက အ၀တ်လျှော်တယ်။ တစ်ဇလုံကို ၃၀၀၀ ရတယ်။ တချို့ကျတော့ လပြတ်နဲ့ ပေးတာ တစ်နေ့ကို သုံးဇလုံလောက်တော့ လျှော်ရတယ်။ အိမ်မှာလူသုံးယောက် အလုပ်လုပ်ပေမယ့် စုမိတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ရရစားစားပါပဲ။ ဒါတောင် ပြီးခဲ့တဲ့မိုးတွင်းက အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေတုန်းကဆိုရင် ဆန်ကွဲကျိုပြီး သောက်ခဲ့ရတယ်။ ဖျားနာတဲ့အခါလည်း ဗမာဆေးပဲသောက်ပြီး ပျောက်သွားတာ။ ရွှေမြင်တင်ဆေးနဲ့ ကွမ်းရွက်ကတော့ မရှိမဖြစ်ပဲ”လို့ ပြောပြနေရင်း ကွမ်းရွက်ကိုထုတ်၊ ထုံးသုတ်၊ ကွမ်းသီးနဲ့ ဗမာ ဆေးထည့်ပြီး ကွမ်းဝါးလိုက်ရင်း ဒေါ်သန္တာဝင်းက ပြောပြနေပါတယ်။ သူမပါးစပ်အတွင်းက ကွမ်းယာကို တစ်ချက်၊ နှစ်ချက်ဝါးပြီး နောက်မှာတော့ အိမ်ကြမ်းပြင်က ကြမ်းပေါက်လေးကို လက်နှင့်ဖြဲကာ အောက်သို့ ကွမ်းသွေးထွေးချလိုက်လေရဲ့။ သူမရဲ့ကလေးတစ်ယောက်က ဇလုံထဲထမင်းထည့်စားနေပြီး နံဘေးမှ အမြီးနှံ့နေသော ခွေးများကို သူစားနေသော ထမင်းအချို့ ချကျွေးနေပါတယ်။ ချင်းတွင်းမြစ်ပေါ်မှာနေရတဲ့ သူမတို့ဘ၀ကို သူမတို့ ကျေနပ်လေဟန်တော့ ရှိနေမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ချင်းတွင်းမြစ်ပြင်မှာတော့ အေးစက်စက်မြောက်ပြန်လေလား၊ မုတ်သုံရာသီနဲ့အတူ ဆုတ်ခွာရင်း ထွက်ခွာမယ့်လေတွေလားတော့မသိ၊ တဟူးဟူးတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ မြစ်ထဲကစက်လှေများ၊ ရှော်တယ်၊ အမြန်ယာဉ်များ ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူမတို့အိမ်လေးက ငလျင်လှုပ်တဲ့အလား တသိမ့်သိမ့်တုန်ခါလို့ ယိမ်းလိုက် နွဲ့လိုက်နဲ့ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်သန္တာဝင်းနှင့် ကလေးများကိုကြည့်တော့ မတုန်မလှုပ်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မို့ အိမ်လှုပ်သွားတာတောင် မသိကြတဲ့အလား။ “ဒီကလေးတွေကိုလည်း ဒီပေါ်မှာပဲ မွေးတာလေ။ အခု အငယ်ဆုံးက ငါးနှစ်။ သူလည်း ရေကူးတတ်နေပြီ”တဲ့။ ဒီပေါ်မှာပဲမွေး ဒီပေါ်မှာပဲကြီးဆိုတော့ သူမတို့အတွက် ရေပြင်က မြေပြင်သဖွယ်လိုပေါ့။ ကလေးတွေငယ်တုန်းက ရေထဲပြုတ်မကျဘူးလားဆိုတော့ တစ်ခါမှပြုတ်မကျဖူးဘူးတဲ့။ အော် သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်နဲ့ကျတော့လည်း အံကိုက်လိုကိုဖြစ်လို့။
အကာအကွယ်မရှိ မြစ်ပြင်ထဲက ၀ါးဖောင်လေးပေါ်က အိမ်လေးထဲမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ သူတို့အတွက်တော့ မိုးရွာတာ၊ လေပြင်းတိုက်တာ၊ ဆီးနှင်းကျတာတွေက အဆန်းမဟုတ်တော့။
“အိမ်ရဲ့အမိုးက မိုးလုံပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းလည်း ထူးပြီးအေးတယ် မထင်ပါဘူး။ ရေကြီးတဲ့အခါလည်း ဒီပေါ်မှာပဲ ဆက်နေတာပဲ။ ရေကြီးရင် ကြီးတဲ့အလိုက် ကမ်းကပ်ပြီး ရေပြန်ကျသွားတော့ လျောကျသွားတာပဲ။ ရေကြီးလို့ ရေဘေး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း သွားနေရအောင်လည်း ကျွန်မတို့ကို ရပ်ကွက်စာရင်းမှာမပါလို့ လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့လေ။ ဒီတော့လည်း ဒီမှာပဲ ဆက်နေကြတာပေါ့”ဒေါ်သန္တာဝင်းက မဲ့ပြုံးလေးပြုံးပြီး ဆက်ပြောနေပါတယ်။ အော်မြန်မာပြည်ထဲမှာ မွေး၊ မြန်မာပြည်ထဲမှာကြီးပြင်းလာကြတဲ့ သူတို့တစ်တွေက ခဏတာ ကုန်းပေါ်တက်နေဖို့အတွက် ရပ်ကွက်စာရင်းမှာ မပါကြလို့ မနေရတော့ဘူးတဲ့လား။ ဒါနဲ့သူတို့ကို တစ်ဆက်တည်း မှတ်ပုံတင် ရှိလားမေးကြည့်တော့ သူမတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး မှတ်ပုံတင်မရှိကြ။
အိမ်ထောင်စုဇယားကလည်း သူမ၏ မိဘလက်ထက်က အိမ်ထောင်စုဇယား။ မှတ်ပုံတင် မလုပ်ဘူးလားမေးကြည့်တော့ သူများတွေက မှတ်ပုံတင်လုပ်ရင် ပိုက်ဆံပေးရတယ် ပြောလို့ မလုပ်တော့ဘူးတဲ့လေ။ မှတ်ပုံတင်မရှိလည်း နေလို့ရနေတာပဲဆိုပြီး ပြန်ဖြေပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဘယ်လို မဲပေးသလဲမေးကြည့်တော့ သူမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး မဲမပေးပါတဲ့။ သူမတို့ကို ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း၊ မဲပေးရမည့် အကြောင်းရှင်းပြသူ၊ ပြောပြသူ၊ တစ်ယောက်မှမရှိပါတဲ့။ “အစ်မတို့ပဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒီနားကတွေ အကုန်လုံး ဘယ်သူမှ မဲမပေးဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း မှတ်ပုံတင်မရှိကြဘူးတဲ့။ အနီးအနားကို လိုက်မေးကြည့်တော့လည်း တကယ့်ကို မှတ်ပုံတင်မရှိကြ။ မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘနှစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် မရှိကြဘူးဆိုတော့ မျက်လုံးကျဉ်းကျဉ်း အသားဖြူဖြူ စကားသံဝဲ၀ဲနှင့် မြန်မာစကားကို ပီပြင်မပြောဆိုနိုင်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားလက်မှတ်ကို တရားဝင် ကိုင်ဆောင်ထားကြသူတွေ၊ အနောက်ဘက်က ခိုးဝင်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားကြသော ဘာလက်မှတ်မှမရှိဘဲ လူ့အခွင့်အရေး တွင်တွင်အော်နေကြတဲ့ အချို့လူမျိုးတွေကို စာနာသနားနေတဲ့ သူတွေကို မေးလိုက်ချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံထဲ မှာ မွေး ၊ မိဘဘိုးဘွားတွေက မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်ဖြစ်ပြီး မဲပေးခွင့်တောင် မရှိ ၊ နိုင်ငံသားရယ်လို့ အသိအမှတ်ပြု အထောက်အထား လက်မှတ်တောင် မရှိတဲ့သူတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေးတို့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုများ စဉ်းစားထားကြပါသလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ချင်မိပါတယ်။
ကုန်းပေါ်နေဖို့ စိတ်မကူးဘူးလား ကုန်းပေါ် မနေချင်ဘူးလား မေးကြည့်တော့ မချိပြုံးလေးပြုံးပြီး “မနေချင်ပါဘူး။ ဒီမှာလည်း နေလို့ ရတာပဲလေ”တဲ့။ “အရင်ကတော့ ခြံလေးတစ်ကွက် ၀ယ်ဖူးတယ်။ စီးပွားရေးအဆင်မပြေတာနဲ့ ပြန်ရောင်းပြီး ၀ါးဖောင်ပေါ်ပဲပြန်နေကြတာ”လို့ ဒေါ်သန္တာဝင်းက ပြန်ဖြေပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို လျှာရှည်ပြီးမေးလိုက်မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပင် စိတ်ထဲမှ တိုးတိုးလေး ကျိန်ဆဲလိုက်မိရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ ဒေါသထွက်မိတာပေါ့။ ဘယ်သူကများ ၀ါးဖောင်ပေါ် တစ်သက်လုံး နေချင်မှာလဲ။ သူတို့တစ်တွေလည်း အခြားသူတွေလို ခြံနှင့်ဝင်းနှင့်အိမ်နှင့် နေချင်ကြမှာပေါ့။ စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ အထဲက ထမင်းစားဖို့ကိုပဲ မနည်းကြိုးစား ဖြေရှင်းနေရတဲ့ သူတို့တွေအတွက် နေရေးဆိုတာက နောက်ဆုံးမှ ဖြေရှင်းရမည့် အရေးမကြီးသော ပြဿနာများဖြစ်နေတာ သိပ်ထူးဆန်းတော့တာမှ မဟုတ်တာ။ “မနှစ်က ၀ါးဖောင်တစ်အိမ် မျောသွားသေးတယ်လေ။ ညအိပ်နေတုန်း မျောသွားတာဆိုတော့ ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူး။ ဟိုးအောက်ဘက်အထိ မျောသွားတာ။ ဒီကတွေ အကုန်လုံးစက်လှေစုငှားပြီး ပြန်ဆွဲလာကြရတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ လူဘာမှမဖြစ်လို့ “ ဒေါ်သန္တာဝင်းက မနှစ်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြန်ပြောပြနေတာပေါ့။ သူမတို့အတွက်တော့ စိတ်အေးလက်အေး ဘာမှ မထူးသလို ပြန်ပြောပြနေပေမယ့် နားထောင်ရတဲ့သူအဖို့ စိတ်ချောက်ချားစရာ။ ဘ၀ဆိုတာ ဒုက္ခတွေနဲ့ စရန်သတ်ထားသလိုပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဒီလိုမျောသွားတာမျိုး သိပ်မရှိလို့ သိရပါတယ်။ “ ကြိုးသုံးချောင်းနဲ့ သုံးနေရာခွဲပြီး ကမ်းဘက်မှာတိုင်စိုက်ပြီး အိမ်ဆောက်ထားတဲ့ ၀ါးဖောင်ကို ချည်ထားတာလေ။ ညရေးညတာ တစ်ရေးနိုးတဲ့အခါတော့ ထပြီးကြည့်ရတာပေါ့ ”။
သူတို့တွေအဖို့ ဒီလိုဝါးဖောင်လေးထဲက အိမ်လေးမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စိတ်ချလက်ချ အိပ်ပျော်နိုင်ကြတာလဲဆိုတာ မသိနိုင်။ တော်တန်ရုံမိုးကြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ကုန်းပေါ်ကအိမ်ထဲမှာ အိပ်နေတဲ့လူတွေ နိုးလာကြပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာ။ သူတို့တွေကတော့ ဘယ်လိုအင်အား ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ် ဘယ်လိုသတ္တိတွေနဲ့ နေထိုင်နိုင်ကြတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားမရ။ ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုတွေကြောင့် သူတို့ ဘာကိုမှမကြောက်တတ်ကြတော့ သလို ၊ ဘယ်မှသွားလို့မှ မရတော့လည်း ရှိတဲ့သတ္တိလေးအားအဖြစ် မွေးမြူ နေထိုင်ရတာ နေမှာပါပဲလေ ။
မြစ်ရေပြင်ကိုကြည့်ရင်း သူမတို့ အသုံးပြုတဲ့သောက်သုံးရေအကြောင်း စပ်စုမိပါ တယ်။ “ချက်ပြုတ်တာလား ဒီရေနဲ့ပဲ ချက်တာပေါ့။ သောက်ရေကိုတော့ ကုန်းပေါ်က တုံကင်ရေခပ်တယ်”ဟု ဒေါ်သန္တာဝင်းက ပြောပြပါတယ်။ သူမတို့၏ တဲအိမ်ရှေ့မှာပဲ အ၀တ်လျှော်ကြ၊ ရေချိုးကြ၊ အ၀တ်လှန်းကြ၊ နေစာလှုံကြပေါ့။ အပေါ့အလေးအတွက် အိမ်သာဟူ၍ မည်မည်ရရမရှိ။ ကြည့်ရသည်မှာ အိမ်ပေါ်ကနေပဲ ရေထဲကို ကိစ္စပြီးလိုက်တယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ အိမ်ဘေးမှာက ကလေးအချို့ ရေချိုး ရေကူးနေကြပါတယ်။ အခြားဝါးဖောင်ပေါ်က အိမ်တွေလည်း သူမတို့ကဲ့သို့ပင်၊ ချင်းတွင်းမြစ်ရေထဲတွင် ခဲဓာတ်များတာ သောက်သုံးရန်မသင့်တာ သိပုံမပေါ်။ ကိုယ့်မှာသာ သူတို့တွေကိုကြည့်ပြီး “ လှံဖျားပေါ် ပုစဉ်းနားတာ ကျီးကန်းက ကြောက်ချေးပါသလို”ဖြစ်နေတာပေါ့ ။ သူတို့ အတွက်က ဒီရေပေါ်မှာနေ ဒီရေကိုသုံးပြီးဘ၀ကို ဒေါင်ကျကျ ပြားကျကျ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ သူတွေသာ။
တောင်ဘက်ဆီမှ မိုးလေးညို့လာပြီး မြစ်ပြင်မှာ လေတိုက်လာတော့ ဒေါ်သန္တာဝင်းတို့ တဲအိမ်လေးကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ရေလှိုင်းတွေကြားမှာ နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေတဲ့ အိမ်လေးအပေါ်မှာ ရေကြောက်တတ်တဲ့သူ အဖို့ ရင်ဖိုချင်စရာ။ မပြန်ခင် ဘေးနားက ၀ါးဖောင်အိမ်လေးတွေကို လိုက်ပတ်မေးကြည့်တော့ မိန်းမသားအများစုက အ၀တ်လျှော် ယောက်ျားသားတွေက ကုန်ထမ်း အလုပ်ဆင်းကြပြီး တဲအိမ်လေးတွေမှာ မိန်းမသားတွေနှင့် ကလေးတွေ ခွေးတွေပဲရှိကြတာပေါ့။ အချို့ကလေးတွေက သောင်ပြင်မှာ ဘောလုံးကန်၊ အချို့က မြစ်ထဲမှာ ရေဆင်းချိုး၊ အချို့ကတော့ အမှိုက်ပုံမှာ ဘာကိုမှန်းမသိ သဲကြီးမဲကြီး ရှာနေကြတာပေါ့။ ၀ါးဖောင်ပေါ်က အိမ်လေးမှာတော့ မိန်းမကြီးများက အ၀တ်လျှော် ထမင်းဟင်းချက် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်။
ဒီလိုနှင့် တစ်နေ၀င်၍ တစ်မိုးချုပ်သွားလျှင် သူမတို့၏ ၀ါးဖောင်ပေါ်က အိမ်လေးမှာ ဘက်ထရီမီးလေးထွန်းပြီး ညစာစား ၊ အချို့က တီဗွီသေးလေးတွေနှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲခွေကြည့်ကြ၊ တီဗွီကြည့်နိုင်သောအိမ်ကို ဘေးနားက အိမ်လေးတွေကလည်း ၀ိုင်းပြီးလာကြည့်ကြမယ်ပေါ့လေ။ ညဉ့်နက်လို့အချိန်တန်ရင်တော့ အားလုံးကိုယ့်ဝါးဖောင် အိမ်လေးကိုယ်ပြန်ပြီး အိပ်စက် အနားယူကြပြီး နေ့တစ်နေ့ကို အိပ်မောကျကာ ကုန်ဆုံးစေမပေါ့။ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းခဲ့သမျှ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်ကြမည်မို့ သူမတို့၏ အတွေးထဲတွင် ရေပေါ်မှာလား ကုန်းပေါ်မှာလားဆိုတာ မတွေးအား။အားလုံးက အိပ်ရာနှင့်ကျောပြင်ထိလျှင် အိပ်ပျော်သွားကြသည်ချည်း ဖြစ်မည်လို့ တွေးထင်မိပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ တစ်မိုးသောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည့် စားဝတ်နေရေးတွေက သူမကို အဆင်သင့် စောင့်ကြိုနေမှာပေါ့။ တစ်ရက်ပြီးလျှင် ၊ တစ်လ ၊နောက်တစ်လပြီးလျှင် တစ်နှစ် ဒီလိုနဲ့ သုံးနှစ်မြောက်ဆိုရင်တော့ ဖောင်အိမ်လေးကို အသစ်တစ်ခါ လဲနိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံစုရင်း၊ တခြားလူတွေလို ကုန်းပေါ်မှာ အိမ်လေးဆောက်ပြီး နေထိုင်နိုင်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်ရင်းနဲ့ပေါ့။ တကယ်တော့ သူတို့စိတ်ကူးတွေက လက်တွေ့ဖြစ်လာမည်လေလား။ စီးပွားမရှိတော့ ပညာမတတ်ကြ၊ ပညာမတတ်ကြတော့ ဘ၀ကို တိုးတက်ဖို့ကမလွယ်၊ သူတို့ ရဲ့ဘ၀အတွက် စဉ်းစားကြည့်ရင်း သူမတို့ကို ငေးမောရင်း ချင်းတွင်းမြစ်ရေ နဲ့ စိတ်ကူးတွေက စီးမျောလို့။ အခြေခံလူတန်းစားဘ၀တွေကို ပြောင်းလဲအောင် မလုပ်နိုင်သရွေ့တော့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုတာ စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တည်မှုမှအပ ဘာမှဖြစ်လာမည်မဟုတ်လို့ တွေးတောမိရင်း ။ ချင်းတွင်းမြစ်ရယ် ဖောင်အိမ်လေးတွေရယ် အခြေခံလူတန်းစားတွေရယ် ကျန်းမာကြပါစေလို့ တိတ်တခိုး ဆုတောင်းရင်းဖြင့် ...။
ကြက်ခြေထောက်မာလာသုပ် - ပုစွန်ခေါက်ဆွဲရည်ချက်နည်း - ထိုင်းစတိုင် ပဲကြာဇံသုပ်
(မူရင်း ချက်ပြုတ် တင်ဆက်သူများရဲ့ နာမည်မှာ သူတို့ Page တွေကို Links ချိတ်ပေးထားပါကြောင်း)
သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကဲကဲအိမ်မှာ လုပ်စားတဲ့နည်းလေးကို ဝေမျှထားပါတယ်။ ကြက်ခြေထောက်မာလာရှူးရှဲလေးကတော့ ထမင်းနှင့် စားတာထက် ဒီအတိုင်းလေး ရေနွေးကြမ်းပူပူလေးနှင့် စားတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
ကုန်သွားသည့်တိုင် ပါးစပ်တွေ ပူနေပေမယ့်လည်း ဆက်စားချင်အောင် ကောင်းပါတယ်ရှင်။
**ဘေးမှာ တစ်ရှူးလေး များများယူထားပါနော် :)
စီချွမ်ငရုတ်ကောင်း ဇွန်းသေး ၁၀က်
ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့်ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း
ပဲငပိအငန် ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်း
ရှာလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း ၁ဇွန်း
ကြက်ပြုတ်ရည် ပန်းကန်လုံး ၁လုံးစာ
၁) အိုးထဲ ဆီ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်၊ နုပ်နုပ် စင်းထားတာ ထည့်ပါ။ ချင်းကို ပါးပါးလှီးထည့်ပါ။ ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့်ထည့်ပါ။
၂) စီချွမ်ငရုတ်ကောင်း၊ ပဲငပိအငန်၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ နံနံပင်၊ တရုတ်မဆလာ၊ မြေပဲဆံလှော်ထောင်း၊ နှမ်းလှော်၊ သကြား ထည့်မွှေပါ။
၃) ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ ရှာလကာရည် ဆက်ထည့်ပါ။ ကြက်ပြုတ်ရည်ထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ပါ။
၄) ကြက်ခြေထောက်တွေကို သန့်စင်ပြီး ဆားအနည်းငယ်ဖြင့် နယ်ပါ။ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ရေခမ်းတည်ပါ။
၅) နူးပြီဆိုလျှင် မာလာအနှစ်ဖြင့် ရောပါ။ ပန်းကန်ထဲ ပြောင်းထည့်ပြီး နှမ်းလှော်နှင့် ကြက်သွန်မိတ် အနည်းငယ် ဖြူးပါ။
အရမ်းစားလို့ ကောင်းတဲ့ ပူပူစပ်စပ် ကြက်ခြေထောက်မာလာသုပ် ရပါပြီရှင်။
ကြက်ဥခေါက်ဆွဲခြောက် ၁ထုပ် (သို့ ) ကြက်ဥခေါက်ဆွဲ ၁၅ကျပ်သား
*Readymade ကြက်ပြုတ်ရည်အစား ကြက်ရိုးတွေနှင့်လည်း ဟင်းရည်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
၁) ပုစွန်တွေကို ခေါင်းဖြုတ်၊ အမြီး ဖယ်ပြီး အမည်းကြောင်းလေးကို ထုတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ရေဆေးပြီး ရေစစ်ပါ။
၂) အိုးထဲကို ရေ အနည်းငယ် ထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ပါ။ ဆူလာလျှင် ရှာလကာရည် အနည်းငယ် ထည့်ပါ။ ပုစွန်တွေကို ထည့်ပါ။ ပန်းရောင်သမ်းလာလျှင် ဆယ်ယူပြီး ပန်းကန်ဖြင့် ထည့်ထားပါ။
၃) အိုးထဲကို ရေ တစ်ဝက်ခန့် ထည့်ပြီးဆူအောင် တည်ပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် ကြက်ဥခေါက်ဆွဲခြောက်တွေ ထည့်ပါ။ ၅မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ပြုတ်ပြီး ဆယ်ယူပါ။ အပေါ်မှ ရေအေးလောင်းချပြီး ရေစစ်ထားပါ။
၄) ကြက်သွန်နီကို အခွံနွှာ ရေဆေးပြီး အဖတ်လေးတွေရအောင် ခွာပါ။ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ ကို မညက်တညက် ရောထောင်းပါ။
၅) နံနံပင်နှင့် ကြက်သွန်မိတ်တို့ ကို ပါးပါးလှီးပြီး ပန်းကန်လေးတွေဖြင့် သပ်သပ်စီ ထည့်ပါ။ သံပုရာသီးကိုလည်း အစိပ်လေးတွေ စိပ်ပြီး ပန်းကန်ဖြင့် ထည့်ထားပါ။
၆) အိုးထဲကို ရေ ၁၀၀၀မီလီလီတာ (ရေသန့်ဗုး ၁ဗူးစာ) ထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ပါ။ ငါးငံပြာရည် အနည်းငယ် နှင့် ဆား အနည်းငယ် ထည့်ပါ။ ဆူလာလျှင် ကြက်ပြုတ်ရည်ထည့်ပြီး ဆူအောင် ထပ်တည်ပါ။
၇) ဟင်းရည်ထဲ ကြက်သွန်နီနှင့် ကြက်သွန်မိတ် အနည်းငယ် ထည့်ပါ။
၈) တစ်ယောက်စာအတွက် ပန်းကန်ထဲကို ခေါက်ဆွဲ လိုသလောက် ထည့်ပါ။ ပုစွန် ၃ကောင်လောက်ထည့်ပါ။ ကြက်ဥ ၁လုံးဖောက်ထည့်ပါ။ ပြီးမှ ဟင်းရည်ပူပူကို အပေါ်မှ လောင်းထည့်ပါ။ အစာပလာ ထည့်ပြီး သုံးဆောင်လို့့ရပါပြီရှင်။
ငရုတ်သီးစိမ်း – ၈တောင့် (ညက်အောင် ထောင်းထားပါ)
မြေပဲ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း (မညက်တညက် ထောင်းပါ)
ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
သံပရာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး ဒယ်ထဲ ဆီ (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း)ထည့်ပြီ ဆီပူလာလျှင် ငရုတ်သီးမှုန့် ထည့်ဆီသပ်ပေးပါ။
၂။ ပဲကြာဇံကို ရေစိမ်ထားပေးပါ။ ပြီလျှင် ပဲကြာဇံကို တ၀က်ဖျက်ပေးပါ။
၃။ ပြီနောက် ဒယ်ထဲ ရေတ၀က်ခန့်ထည့်ပြီ ဆူအောင်တည်ပါ။ ဆူလာလျှင် ပဲကြာဇံများကို ၂မိနစ်ခန့် ထည့်ပြုတ်ပြီ ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ထားပေးပါ။
၁။ ပြီလျှင် ပဲကြာဇံကို ပန်းကန်ခွက် တစ်ခုထဲထည့်ပါ။
၂။ ထို့နောက် ထောင်းထားသော ငရုတ်သီးစိမ်းများကို ထည့်နုယ်ပေးပါ။
၃။ ပြီမှ ဆီသပ်ထားသော ငရုတ်သီးဆီချက်များကို ပဲကြာဇံသုပ် ဇောက်ပန်းကန်ထဲထည့်ပေးပါ။
၄။ ပြီနောက် ကြက်သား၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အားလူး၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ မြေပဲ တို့ကို ထည့်ရောမွှေလိုက်ပါ။
၅။ အရသာအတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ ငါးငံပြာရည်၊ သံပရာရည်တို့ထည့်ပြီသမအောင် ရောမွှေပေးပါ။
၆။ ထို့နောက် အရသာ အနေတော်လျှင် အပေါ်မှ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်မြိတ်တို့ ဖြူးပေးပြီ အရသာရှိသော ထိုင်းစတိုင် ချဉ်ချိုစပ် ပဲကြာဇံသုပ်ကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…